Ogologo oge ole ka ị gbalịrị ya? Kedu ka imere nke ọma? Kedu ụdị ego ị mere? Ka anyị tụlee ego ezumike nka gị… ọ bụrụ na ị gbalịrị ya otu ọnwa, ezuteghị onye na-ahụ maka ego, wee tinye ego narị ole na ole, kedu ka ị chere na ị ga-ala ezumike nka?
Ihe atụ na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ndị ọkachamara amatalarị etu ntinye ego si arụ ọrụ - ma ọ na-etinye ego na ebuka ma ọ bụ na-etinye ụfọdụ ego na 401k. Ọ na-esetịpụkwa atụmanya ogologo oge na anyị ekwesịghị inwe obi ụtọ ma ọ bụ mechuo ihu na elu na ala ma kama ilekwasị anya na-aga ogologo oge. Metaphors na-arụ ọrụ!